Kala Bixinta Gaarka ah ee Ellectric Mining - the Guaycura & Pericue - Ellicott Dredges
Milkiilaha - Roca Fosforica Mexicana SA de CF (ROFOMEX), Mexico
Hull Size - dhererka cagaha 108 '
Qoto dheer Qodis 58 '
Cabbirka Cabbitaanka Tuubbada - Aqoonsiga 27 "
Isugeynta Awoodeed Faras 2050
Bishii Juun 1981 labadii mataano ee 'Guaycura' iyo 'Pericue' ayaa lagu baabtiisay Baltimore Roca Fosforica Mexicana SA de CF (Rofomex) ee Mexico. Rofomex-kii loo yaqaan 'Rofomex' waxaa loogu magac daray laba qabiil oo Hindi ah oo maxalli ah, "kuna soo biirista dhaqammadii hore ee jasiiradda la teknolojiyada casriga ah". Taxanaha Ellicott Brand 3000E koronto ku shaqeeya "Super-Dragon®”Dredges ayaa loo isticmaalay mashruuc laga sameeyo macdanta fosfateetka magaalada LaPaz, Baja California, Mexico.
Laba biyood oo saaran markabka dushiisa
badalaysa kanaalka Panama
Mashruucu wuxuu adeegsaday boqolkiiba boqol ee 100 shaqada Mexico, oo hoos udhigay 2,000 tan oo cammuud adag oo fosfaydh saacad ah, una wareejiya dhirta sabaynaysa. Dhawaqa ayaa dib loogu soo celiyey balliga waxaana macdanta laga sii watay warshad ku taal xeebta.
Heerarka 24 Standard ee la qaadi karo ee caadiga ah ayaa loo beddelay koronto xeebeed oo laga helo macdan gaar ah. Doomaha la rarto oo si buuxda isugu soo ururay markab culus.
Dhisme guryo badan ayaa dejiyay qodis aad u adag.